LibreOffice 7.2.2 yasvika iine makumi matanhatu nesere nekugadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.2.2 yasvika ine makumi matanhatu nesere yakagadziriswa pamwe nekugadziridzwa kweyemahara hofisi suite
Munyika yeLinux, nhasi izuva rakatarwa pakarenda. Mazuva ano, Canonical iri kuburitsa Ubuntu 21.10 Impish Indri, asi nekuda kwekuti kuburitswa kukuru kuri mumabasa hazvireve kuti software isingakoshi haichashandiswi. Imwe yadzo inonyanya kufarirwa hofisi hofisi suite, uye mashoma mashoma apfuura yakatangwa LibreOffice 7.2.2. Sezvineiwo, iyo 7.2 akateedzana ndiyo iyo iyo Impish Indri inoshandisa.
Sezvakaita v7.2.1 Yakaburitswa pakati paSeptember, LibreOffice 7.2.2 yakauyawo nekugadzirisa uye kugadzirisa, asi iyo nhamba ye shanduko dzakaunzwa nguva ino yanga iri makumi matanhatu nesere. Iyo Gwaro Foundation inokarakadza zvakare kuti iyi ndiyo vhezheni yesutu yaro nenhau dzichangoburwa, asi izvo hazvisati zvichikurudzirwa kumatimu ekugadzira. Munzvimbo dzebasa, TDF inokurudzira kushandisa LibreOffice 7.1.6.
LibreOffice 7.2.2 haisati yakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira
Iyo LibreOffice Nharaunda uye LibreOffice Enterprise mhuri yezvigadzirwa yakavakirwa pane LibreOffice tekinoroji chikuva, mhedzisiro yemakore ebudiriro ekuedza nedonzvo rekupa rinotevera-chizvarwa hofisi suite kwete chete kune desktop asiwo yefoni uye gore.
Shanduko dzakaunzwa muLibreOffice 7.2.2 inosanganisirwa muchirongwa Wiki, mu Iyi link shanduko mune yekutanga Regedza Musarudzo uye mu uyu mumwe avo vechipiri.
Zvekare zvakare, Iyo Gwaro Sisekelo inotiyeuchidza kuti isu takatarisana ne nyowani Yemunharaunda vhezheni uye kuti Bhizinesi inowanikwa nerutsigiro rwakasimudzirwa uye neanoda-maficha. Uye zvakare, panguva ino isu takayeuchidzwawo kuti tinogona kushandisa LibreOffice tekinoroji yeApple neIOS (panokana Chrome (pano).
La inotevera vhezheni ichave iri mukati angangoita mavhiki mana, ichave LibreOffice 7.2.3 uye icharamba isinga kukurudzirwe yezvikwata zvekugadzira. TDF inowanzo mirira iyo yechishanu poindi yekuvandudza kuti itiraire isu kuti tisvetuke, kunze kwekunge tichida kuti nhau dzese dzive dzekutanga, mune iyo kesi tinogona kuisa LibreOffice 7.2.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » LibreOffice 7.2.2 yasvika ine makumi matanhatu nesere yakagadziriswa pamwe nekugadziridzwa kweyemahara hofisi suite
Intel haichazovaka yayo UK fekitori nekuda kweBrexit
AlmaLinux inova yenhengo-centric chirongwa